2020 – doodhmati || dudhmati
February 9, 2020	news 0
प्रदेश २ र ५ को संरचना परिवर्तन हुने प्रचण्डको दाबी माघ २६ गत्ते,काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रदेशको सीमाङ्कनमा परिवर्तन हुनसक्ने बताएका छन्। नुवाकोटको पञ्चकन्या गाउँपालिकाको आयोजनामा सुरु भएको प्रथम पञ्चकन्या ‘चेयरमेन कप’ भलिबल प्रतियोगिताको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले प्रदेश नं …
माघ २४ गत्ते । कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट चीनमा एकैदिन ७३ जनाको मृत्यु भएको छ। त्यसमध्ये ६९ जनाको मृत्यु हुबेई प्रान्तमा भएको हो। चिनिया स्वास्थ्य अधिकारीका अनुसार मृत्यु हुनेको संख्या ६ सय ३६ पुगेको छ। त्यस्तै बिहीबार रातसम्म थप ३ हजार १ सय ४३ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। उनीहरुलाई …
माघ २४ गत्ते । सुन एक दिनमै तोलामा ४ सय रुपैयाँले बढेको छ। हिजो प्रतितोला ७५ हजार २ सयमा कारोबार भएको सुन आज ७५ हजार ६ सयमा रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ। निरन्तर उकालो लागेर प्रतितोला ७६ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म पुगेको सुनको मूल्य घटेर ७४ हजार ८ सयमा आएको थियो। …
माघ २४ गत्ते,सर्लाही । हरिवनस्थित इन्दुशंकर चिनी उद्योगले किसानलाई यो सिजनमा क्रसिङ गरिएको उखुको भुक्तानी दिन सुरु गरेको छ । जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रका दुई चिनी उद्योगले उखुको बक्यौता र सरकारले अनुदानबापत किसानलाई गत वर्षकै भुक्तानी दिएका छैनन् । पुस ११ बाट क्रसिङ सुरु गरेको इन्दुशंकरले बुधबारसम्म १५ लाख ६२ हजार क्विन्टल उखु …
एजेन्सी, माघ २४ गते । कोरोना भाइरस विषयमा सबैभन्दा पहिले जानकारी दिने चिनियाँ डाक्टर लि वेन्लियाङको कोरोनाको मत्यु भएको छ । कोरोना भाइरसकै संक्रमणटबाट डा. वेन्लियाङको मृत्यु भएको हो । चीनको उहान सेन्ट्रल हस्पिटलमा कार्यरत डा. लि वेन्लियाङको कोरोना भाइसरकै संक्रमणका कारण मृत्यु भएको अस्पतालले जनाएको छ । गएको ३० …
विभिन्न पार्टी परित्याग गरी दर्जनौ युवा नेकपामा प्रवेशःमेयर बरबरियाले अबिर माला लगाई गरे स्वागत
माघ २३ गत्ते,जनकपुरधाम । धनुषाको शहिदनगर नगरपालिकामा समाजवादी फोरम र नेपाली काँग्रेस पार्टी परित्याग गरी दर्जनौं युवा नेकपामा प्रवेश गरेको छ । शहिदनगर नगरपालिकाको वडा नं. १ मा आयोजना गरिएको पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा मेयर उदय कुमार बरबरिया नव प्रवेशीहरुलाई अबिर तथा फूलमाला लगाएर स्वागत गर्नुभएको थियो । समाजवादी फोरम र …
प्रदेशसभालाई ‘पेपरलेस’ बनाईने
माघ २२ गत्ते,जनकपुरधाम । प्रदेश २ का प्रदेश सांसदले अब ल्यापटप पाउने भएका छन् । प्रदेशसभालाई ‘पेपरलेस’ बनाउने उद्देश्यले प्रदेशसभा सचिवालयले सबै सांसदलाई ल्यापटप प्रदान गर्ने भएको हो । ल्यापटप आइसकेको र केही दिनभित्रै सबैलाई वितरण गरिने सभामुख सरोजकुमार यादवले जानकारी दिए । प्रदेशसभालाई ‘पेपरलेस’ बनाउन र सरकारको खर्च जोगाउन …
प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा सेवाग्राही ठगिदैं
माघ २२ गत्ते,जनकपुरधाम । उपचारका लागि सरकारी अस्पतालमा आउने बिरामीलाई कमिसनको चक्करमा चिकित्सक नै निजी क्लिनिकमा पठाउने गरेको भेटिएको छ । उपचारका लागि प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधाम पुग्ने बिरामीहरुलाई चिकित्सकहरूले अस्पतालमा उपचार नगरी क्लिनिकमा पठाउने गरेको खुलेको छ । यसमा प्रादेशिक अस्पतालका चिकित्सकदेखि कर्मचारीसम्मको मिलेमतो देखिएको छ । यसमा सर्वसाधारण मात्र …
सुनचाँदीको भाउ घट्योः७५ हजार ६ सय रुपैयाँमा कारोबार हुँदै
माघ १५ गत्ते,काठमाण्डौ । बुधबार सुनको भाउ तोलामा चार सय रुपैयाँले घटेको छ । सुन बुधबार तोलाको ७५ हजार ६ सय रुपैयाँ निर्धारण गरिएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । यस्तै चाँदीको भाउ बुधबार तोलामा २५ रुपैयाँले घटेको छ । चाँदी बुधबार तोलाको आठ सय ७० रुपैयाँमा कारोबार भैरहेको …
कोरोना भाइरसः मृतकको संख्या १३२ , ६ हजार संक्रमित, विभिन्न देशले आफ्ना नागरिकको उद्धार गर्न सुरु गरे
माघ १५ गत्ते,काठमाडौँ । विश्वका विभिन्न देशले नोवल कोरोना भाइरसको संक्रमणको केन्द्र मानिएको चिनियाँ सहर वुहानबाट आफ्ना नागरिकलाई उद्धार गर्न थालेका छन् । पछिल्लो जानकारीअनुसार अस्ट्रेलियाले आफ्ना ६०० जना नागरिकलाई वुहानबाट उद्धार गरी क्रिस्मस आइल्यान्डमा दुई हप्तासम्म क्‍वारेन्‍टाइनमा राख्ने भएको छ । यस्तै जापान, अमेरिका तथा ईयूका देशले पनि आफ्ना …
August 15, 2017	43,127
May 21, 2017	4,195